Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » IATA waxay bilawday shahaadada batteriga lithium cusub
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Hong Kong • Wararka Nederland • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Xarunta ugu Wanaagsan ee Xaqiijiyeyaasha Madaxbannaan (CEIV) Battery Lithium oo ay bilowday IATA si loo hagaajiyo maaraynta nabdoon iyo gaadiidka baytariyada lithium ee silsiladda sahayda.
Batariyada Lithium waa ilaha korontada ee muhiimka u ah alaabo badan oo macmiil oo aan dhammaanteen ku tiirsannahay.
Waxaa muhiim ah in baytariyada lithium -ka si badbaado leh loogu rari karo hawada ha ahaato alaab la dhammeeyey ama qayb ahaan silsiladaha sahayda ee caalamiga ah.
CEVA Logistics waa shahaadadii ugu horraysay ee CEIV Lithium Battery ee hawlaheeda Madaarka Caalamiga ah ee Hong Kong iyo Madaarka Amsterdam Schiphol.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) waxay biloowday shahaado cusub oo warshadeed- Xarunta Heerka Sare ee Xaqiijiyeyaasha Madaxbannaan (CEIV) Battery Lithium - si loo hagaajiyo maaraynta nabdoonaanta iyo gaadiidka baytariyada lithium ee silsiladda sahayda.
“Batariyada lithium -ku waa ilaha korontada ee muhiimka u ah alaabo badan oo macmiil oo aan dhammaanteen ku tiirsannahay. Waana muhiim in aan si badbaado leh ugu raranno hawo ha ahaato alaab la dhammeeyey ama qayb ahaan silsiladaha sahayda caalamiga ah. Taasi waa sababta aan u horumarinay shahaadada Batroolka Lithium CEIV. Waxay siinaysaa hubiyaasha maraakiibta iyo shirkadaha duulimaadka in shirkadaha saadka ee la aqoonsan yahay ay ku shaqeeyaan heerka ugu sarreeya ee amniga iyo amniga marka ay dirayaan baytariyada lithium, ”ayuu yiri Willie Walsh, IATAAgaasimaha guud iyo agaasimaha guud.
Shixnadaha baytariyada lithium (keligood ama alaab la dhammeeyey) waa inay u hoggaansamaan heerarka badbaadada caalamiga ah ee sida wanaagsan loo soo saaray, sida loo soo saaray, loo tijaabiyey, loo buuxiyay, loo calaamadiyey, loo calaamadiyey, loona diiwaangeliyey. Shuruudahan ayaa ah qodobka ugu muhiimsan IATA Xeerarka Shixnadaha Batariga ee IATA (LBSR) iyo Xeerarka Badeecadaha Khatarta ah ee IATA (DGR) kuwaas oo isku daraya talooyinka sharciyeynta iyo hawlgalka ee warshadaha iyo khubarada dawladda.
CEVA Logistics waa shahaadada ugu horreysa ee CEIV Lithium Battery ee hawlgalkeeda Madaarka Caalamiga ah ee Hong Kong iyo at Madaarka Amsterdam Schiphol Airport, ka dib muddo dheer oo tijaabo ah.
“Waxaan ugu hambalyeynaynaa CEVA inay noqoto shirkaddii ugu horreysay ee saadka ah si ay u gaarto shahaadada batroolka lithium CEIV. Laga soo bilaabo kuwa xamuulka qaada, shirkadaha gacanta ku haya dhulka, kuwa xamuulka qaada iyo shirkadaha maraakiibta, daneeyayaal badan oo la socda silsiladda qiimaha ee ka qayb qaata batteriga CEIV Lithium, ayaa ka xoog iyo waxtar badan u leh warshadaha. Ugu dambayntii, dhammaanteen waxaan dooneynaa inaan aragno shabakad ka mid ah marinnada ganacsiga Battery Lithium CEIV oo ka -qaybgalayaashu ay shahaado ka haysteen asal ahaan, halka ay u socdaan iyo meelaha ay maraan, ”ayuu yiri Walsh.
Macaamiishayada baabuurta, daryeelka caafimaadka iyo teknolojiyadda ayaa qaddarinaya awoodda aan u leenahay inaan si habsami leh u gaarsiinno xallinta saadka ee wax-ku-oolka ah iyada oo aan loo eegin meesha loo socdo ama nooca xamuulka, sida baytariyada lithium-ion. Waayo -aragnimada aan u leenahay qaadista baytariyada kala duwan waxay naga dhigtay lamaane ku habboon IATA markaan tijaabinayno shahaadadooda cusub ee CEIV. IATA waxay sii wadaa inay hormuud ka noqoto bixinta heerarka, qawaaniinta iyo tilmaamaha si kor loogu qaado tayada guud iyo amniga warshadaha gaadiidka hawada. Shahaadadan cusub waxay siineysaa macaamiisha xitaa kalsooni dheeri ah oo ku saabsan awooddeena inaan si badbaado leh oo kalsooni leh u rarno baytariyada lithium-ion, ”Peter Penseel, COO ee xamuulka hawada ee CEVA Logistics.